Sivanina ny masontsivana voalohany an'ny Galaxy M30s | Androidsis
Ny Galaxy M30 dia ho eo afovoany vaovao an'ny Samsung, ao anatin'ny fianakaviana Galaxy M malaza. Mandrakizay dia mbola tsy fantatra firy momba an'io fitaovana vaovao io avy amin'ny mpanamboatra, na dia fantatsika aza fa ho tonga miaraka amina bateria goavambe eny an-tsena izy io. Ankehitriny dia mahita filtration vaovao izahay, izay ahafahantsika miditra amin'ny ampahany amin'ny famaritana an'ity marika eo afovoany vaovao ity.
Misaotra azy ireo isika dia afaka ny ho lasa hevitra voalohany momba izay handaozan'ity Galaxy M30s ity amintsika. Fantatsika sahady fa ny bateria dia ho iray amin'ireo fanalahidy ao amin'ity elanelam-potoana ity. Ny famoahana vaovao dia ahafahantsika mahita kely kokoa amin'ity maodely ity, izay manana ny zava-drehetra mba hahombiazana vaovao ho an'i Samsung.
Ny Galaxy M30 dia hanana efijery 6,4-inch amin'ny habeny. Izy io dia ho tonga miaraka amina kinova RAM, 4 GB amin'ity tranga ity. Na dia hamela antsika safidy roa fitahirizana anatiny aza izy ireo, izay ho 64 sy 128 GB amin'ity lafiny ity. Azonao atao ny misafidy amin'ireo roa ireo. Ho fanampin'izay, azo antoka fa azo itarina amin'ny microSD izy ireo.
Ny finday dia efa ho avy amin'ny Android Pie amin'ny natiora, araka ny nandrasana. Azo inoana fa hampiasa One UI ho toy ny sosona misy azy io fanaingoana, na dia amin'ity lafiny ity aza tsy nisy voalaza tao amin'ilay famoahana. Mety manana fidirana amin'ny fanavaozana ny Android 10 ianao.
ny fisian'ny sensor amin'ny rantsantanana amin'ity Galaxy M30 ity. Na dia tsy hanana NFC finday aza ny telefaona. Vaovao iray izay mety tsy dia faly amin'ny mpampiasa maro. Hatramin'izao, ny pitsopitsony rehetra navoaka momba ity maodelin'ny orinasa ity dia.
Toa tsy mila miandry ela isika vao hahafantatra amin'ny fomba ofisialy ity finday ity. Tombantombana fa ho tonga amin'ny Aogositra ity Galaxy M30 ity, zavatra mbola tsy nitranga, saingy tena azo inoana izany tamin'ity volana ity dia lasa ofisialy. Noho izany, manantena izahay fa hisy vaovao momba izany tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny fepetra voalohany amin'ny Galaxy M30 dia voasivana
Ireo no fiasa voasivana sy mombamomba ny Samsung Galaxy A90 5G amin'ny alàlan'ny boaty fivarotana azy